Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / WOWOW I-Chrome High Arc Bathroom
Ngemigqa yayo emincane futhi ifaka umhlangano wokuqeda umdanso we-pop-up, le faucet eyodwa yokugezela umgodi iyisengezo esihle kunoma yisiphi isikhala.
Ungalokothi uphele ngokuphelele: isiliva faini yesiliva 2321501C ekugcineni kwesibuko se-chrome, umklamo ongelusizo olukhulu kakhulu, futhi nathi sinelungelo lobunqobelo bekhethelo eliphindwe kathathu elingafani nalinye, kwakha indlu yakho yokugezela ikhazimula kakhudlwana.
Imiyalo yokufaka ye-2321501C
Isicucu sokugeza esitsheni sokugezela esisodwa 2321501C
Ufuna isitofu sokugezela esisebusweni esisodwa esenziwe ngethusi eliqinile? Ungabe usabheka okunye! I-WOWOW yenze isitobha sokugezela esisodwa esiklanyelwe ngokuhlukile, esizonikeza ukusonteka okuthandekayo kunoma yikuphi ukuhlobisa okugeza. Abaqambi be-WOWOW bahlala bebheka izindlela ezintsha zokunikeza ukuthinta okhethekile namabhentshisi ayo okugeza. Lesi sibambo sendawo yokugezela esisodwa sibonisa umklamo oyingqimba onekhonkco. Ngeke uwubone lo mklamo kwenye indawo futhi nakanjani uzothenga isikulufu sokugeza esingelolunye uhlobo. Lo mklamo obunjiwe ophindwe kathathu wase-US uguqula noma yiliphi igumbi lokugezela elijwayelekile licwila echibini lokugezela elicwengekile. Ngaphandle kokungabaza!
Lapho uhlela kabusha noma uklama igumbi lakho lokugezela elisha, ungahle uthande ukunaka ngokukhethekile imibhobho yakho yokugezela. Imvamisa ifenisha yokugezela ikhethwa kuphela ekupheleni kwephrojekthi lapho umkhawulo webhajethi ususondele ukuthi ufinyelele (noma weqiwe). Kulokhu, kufanele ugweme ukuthi design yakho yokugezela isengozini ngenxa yezinqumo ezimbi maqondana nefenisha yakho yokugezela. I-Wowow ifakazela kaninginingi ukuthi imishini yokudonsa esezingeni eliphezulu ingafika ngentengo engabizi. Futhi ngisekhona ngomklamo omuhle ongeza ukubukeka okuhle, okunesitayela, kanye / noma okubonakalayo kumklamo wakho wokugezela. Ku-WOWOW siyaqiniseka ukuthi sinikela ngenani eliphakeme kakhulu lemali ongayithola.
Isicucu esisodwa se Bathroom ngenani elihle kakhulu lemali
Ikhwalithi yesibambo sokugezela esisodwa se-WOWOW asiphikiswa. Izinto zayo zensimbi eziqinile zinikezela ukuqina isikhathi eside ekusebenzeni okuphezulu. Uzokuqaphela lokhu lapho ubambe isipikili sokugeza esisodwa se-WOWOW ezandleni zakho. Lokhu kungenye iligi uma kuqhathaniswa nempahla yokushibhile yokugezela ongayithola emakethe. Ngakolunye uhlangothi iWowow ngakolunye uhlangothi ayikaze ibe nomnotho ezintweni zokwakha, ibeke engcupheni yokuyekethisa ikhwalithi yemishini yokugezela yayo. Futhi nokho, isitofu sokugezela esisodwa seWOWOW sishibhile kakhulu. Ngakho-ke, singasho ukuthi ngeke uthole inani elingcono lemali. Ngenxa yalokho, sikunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ungathola isikulufu esilinganayo sendlu yangasese ngentengo ephansi, noma isikulufu esingcono sedatha yokugezela ngentengo efanayo, sizokunikeza ukubuyiselwa kwemali okugcwele. Ngaphandle kwemibuzo ebuziwe
Isikhala esikhulu se-arc sibonisa i-aerator eyonga amanzi. Le Neoperl Aerator esebenza kahle inikeza ukugeleza kwamanzi okubushelelezi nokunobumnene ukuze uthole induduzo efanelekile. Akudingeki ukhathazeke ngokuhlakazeka kwamanzi. Inzuzo eyengeziwe ukuthi ungonga kuze kube ngamaphesenti angama-50 amanzi ngalesi sici esisha sendawo yokugezela isibambo esisodwa seWOWOW. Uyakwazi ukususa le aerator kalula, usebenzisa ithuluzi (elihlanganisiwe). Ngale ndlela ungageza i-aerator njalo, ususe izinsalela ezinzima, ukukunikeza umuzwa ongcono kakhulu womsebenzisi.
Isipikili esisodwa esivivinywe kakhulu
Izingxenye zesibambo sendlu yokugezela eyodwa ziye zahlolwa kaninginingi ukukunikeza ukusebenza okuhle kakhulu. I-ceramic valve ngokwesibonelo ihlolwe kaningi ngama-500,000. Futhi namanje, ngemuva kwazo zonke lezi zivivinyo, i-valve yaqhubeka nokusebenza kahle, ngaphandle kokudonsa, futhi ngaphandle kokuvuza. Umndeni ojwayelekile ungavele usebenzise isendlalelo sokugezela ngaphansi kwezikhathi ezingama-10,000 ngonyaka. Lokhu kusho ukuthi ungasebenzisa lesi sibambo sendlela yokugezela esisodwa iminyaka eminingi, ngaphandle kokulahlekelwa ukusebenza kwawo okuhle.
Ku-WOWOW sinesiqiniseko ngekhwalithi nokusebenza kwesibambo sethu sokugezela esisodwa. Ngenxa yalokho, asesabi ukukunikeza isikhathi semvume yeminyaka emithathu. Uma isibambo sokuphetha sokugeza esisodwa singeke sisebenze kahle kule minyaka emi-3, sizothatha isibambo sakho sangaphansi sendlu yokugezela ngesitayela esisha. Ngale ndlela, uqinisekiswa ngokusebenza okuqhubekayo kwesikhiphi sokugezela sakho sokugezela. Sithatha umthwalo wethu wemfanelo ngokungathi sína futhi sizowuthatha ngaphandle kokungabaza. Akusizi ngalutho ukuthi sineqembu elikhulayo ngokushesha kwamakhasimende athembekile avela kuwo wonke umhlaba.
Isibambo esisodwa sendlu yokugezela esisebenziseka kalula
Ukugeleza kwamanzi kanye nokushisa kwawo kungalawulwa kalula ngesiphatho esisodwa sale faucet yokugeza. Ungaphatha izinga lokushisa lamanzi ngesandla esisodwa, ngenkathi esinye isandla sakho sihlala, ngokwesibonelo lapho uxubha amazinyo. Uzobheka ubushelelezi bokusebenza ngokushesha lapho usebenzisa le vidiyo ephezulu. Kuzoba intokozo ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa lesi sibambo.
Isilawuli sepayipi sokugezela se-chrome isibambo esisodwa se-chrome ye-WOWOW iza nesivalo se-pop-up esifakiwe ngokuchichima. Lesi simiso esivelayo sakha ubunye obubodwa ngesibambo esisodwa sepayipi lakho lokugezela, ukwenza umthelela omkhulu nakakhulu ekuhlobiseni kwakho kwasekhishini. Lesi simiso sokudonsa se-pop-up singasebenza kalula ngomshini owodwa nje. Idinga kuphela ingcindezi encane ukuthi isetshenziswe. Ngenxa yokwakheka kwayo okusebenzayo, ingakhipha amanzi kude nosinki wakho wokugezela ngokushesha nangokuthula.
Ukufaka isibambo sekhithi yokugezela kit
Ngenxa yokusetshenziswa kwezinto eziqinile zethusi, i-WOWOW ingaqinisekisa ukuhanjiswa kwamanzi okungaholi. Ngale ndlela, unganikeza umndeni wakho isipiliyoni samanzi esiphephile futhi akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yamanzi. Okungenani hhayi ngenxa yokugezela isekeli lakho lokugezela. Futhi ngenxa yokuqina kwaso, isibambo sendlu yokugezela eyodwa yeWOWOW ingaqinisekisa lokhu kusebenza iminyaka eminingi.
Isici esikhulu setafula lokugezela isibambo esisodwa se-WOWOW ukuthi ungasifaka ngokwakho ngaphandle kokuqasha ipayipi. Lesi sibambo sokuphephela esisegumbini lokugezela siklanywe ngendlela ehlukile kunamanye amathiphu okugeza futhi singafakwa ngemizuzu engama-30 kuphela. Noma ungeyena uchwepheshe. Isipikili sokugezela esisodwa se-WOWOW siza ne-kit ephelele yezesekeli eqinisekisa inqubo yokufaka ebushelelezi: ipuleti le-4-inch deck (elifana nendawo yokugezela eyakhiwe ngo-1- ne-3-hole), i-chrain pop-up drain, a I-Tucai hose engahambisani ne-intshi enekhwalithi eqinisekisiwe, ukufaka amagilavu, ithuluzi lokususa i-aerator, nokuningi. Ngale ndlela, kulula ukuthi ukwenze ngokwakho ukufaka isikebhe sokugezela esisodwa seWOWOW.
Izinzuzo zasesekeni sokugezela isibambo esisodwa ngokulula:
Inika i-wow-factor kunoma iyiphi indawo yokugezela
Inani Kuhle kakhulu imali
Ukusebenza ngokushelela kokugeleza kwamanzi
Idizayini ehlukile nenhle
Izinto zokusebenza eziphezulu
Kufaka ikhithi yokufaka yokuzenzela
Iwaranti yonyaka we-3
I-SKU: 2321501C Categories: Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa, Amanzi okugeza Tags: qeda kuphole, isikulufu esiphundu, Isandla esisodwa
I-Chrome eyenziwe ngePoland
Inqwaba yephakheji yento
Kwesobunxele / Kwesokudla / Isikhungo
Ukulawulwa kokushisa kwamanzi